Goolhaye Tim Howard Ayaa Dib Ugu Soo Laabtay Ciyaaraha Ka Dib Markii Uu Sadex Bilood Ka Fadhiistay Kubada Cagta? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Goolhayihii hore ee Manchester United iyo Everton ee Tim Howard ayaa dib ugu soo laabtay ciyaaraha saddex bilood ka dib markii uu ka fadhiistay dhamaan kubadda cagta.
Tim Howard oo ay da’diisu tahay 40 jir, waxa uu waqtiyo qurux badan kusoo qaatay Manchester United oo uu koobab la qaaday iyo Everton oo uu ugu jiro liiska ciyaaryahannadiisa goolka u qabtay u qabtay ee raadka quruxda badan ka tegay, hase yeeshee waxa uu xirfaddiisa ula guuray waddanka Maraykanka oo uu u ciyaaray Colorado Rapids.
Dhowaan waxa uu ka mid noqday mulkiileyaasha kooxda Memphis 901 FC oo uu saamiyo badan ka iibsaday, isla markaana u magacowday agaasiamaha ciyaaraha, hase yeeshee waxa uu doortay inuu ka mid noqdo ciyaartoyeeda oo uu u noqdo goolhaye.
Kooxdan oo ka dhisan waddanka Maraykanka, waxay ka ciyaartaa heerarka labaad ee horyaalka kubadda cagta Maraykanka ee loo yaqaano USL Championship, dhowaanna waxay ku fashilantay inay sare ugu soo dallacdo heerka koowaad ee MLS.
“Waxaan jecelahay inaan ciyaaro, waxaan jecelahay inaan tartamo, tanina waxay isiisay fursad aan labadaba ku sameeyo.” Ayuu yidhi Tim Howard.
Ruug-caddaagani waxa kale oo uu yidhi: “Tan iyo markii aan ka fadhiistay ciyaaraha bishii October, dareenkayga kubadda cagtu wuu koray, waxaana isoo jiiday damacayga ah inaan sii wado inaan guuleysto.”
Howard waxa uu Manchester United u ciyaaray 491 kulan oo dhamaan tartamada ah, waxaanu amaah ugaga wareegayy Everton ka hor intii aanu heshiis rasmi ah ugu wareegin.
Sannadihii u dhexeeyey 2003 illaa 2016 ayuu Premier League ka ciyaaray, Xulka qaranka USA, waxa uu u saftay 121 ciyaarood, waxaanu u saftay laba koob adduun.
Mino Raiola Wuxuu Ka Cadhaysiiyey Kooxda Manchester United Waa Maxay Sababtu?